Xaaladda Macluumaadka | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 12, 2013 Sabtida, Janaayo 12, 2013 Douglas Karr
Infographics-ka ayaa aad u kordhay baahida loo qabo in ay noqdeen qayb muhiim ah oo ka mid ah qurbaanno ganacsi. Shirkadaha kuwaas oo ah kabaallaynta infographics ayaa sii wadaya inay arkaan natiijooyin aan caadi ahayn. Infographics kaliya waxay u dhacdaa inay noqdaan isku dhafka ugu fiican ee dhammaan astaamaha waaweyn ee istiraatiijiyad suuq geyn wanaagsan:
Data - waxay bixiyaan macluumaad badan oo ku jira xirmo ay fududahay in la dheefshiido.
Design - markii sifiican loo dhammeeyo, waxay yihiin kuwo qurxin raaxo leh oo xitaa xiiso u leh akhriska.
Kaaraynta - maxaa yeelay waa feyl hal sawir ah, si aan caadi ahayn ayey u fudud yihiin in lala wadaago.
Bulshada - Hantida muuqaalka ah sida 'infographics' ayaa la wadaagaa inta badan marka loo eego waxyaabaha kale.
Search - sababtoo ah si isdaba joog ah ayaa loo wadaagayaa, waxay u muuqdaan inay dib ugu celinayaan xiriiriyeyaal badan daabacaha, kaas oo keena darajada mashiinka raadinta.
In kasta oo buuq badani ka jiro warshadaha oo ku saabsan tayada hoos u dhaca sawirada iyo inta jeer ee si isdaba joog ah u sii kordheysa - Ma aanan arag wax hoos u dhac ah oo ku saabsan sida wanaagsan ee macluumaad muuqaal ah ugu fiicanyahay shirkad. Marmarka qaarkood way adagtahay in la go'aamiyo in infographic uu wax u qaban doono iyo in kale sidaad rabto, laakiin isla'egta guusha waxay u ahayd mid joogto u ah macaamiisheena… baadhista qoto dheer ee saxda ah, sheekada xiisaha badan, iyo sifiican ayaa loogu talagalay qaab-dhismeedka loo yaqaan 'infographic' ayaa loo qaabeeyey waxay horseed u tahay qaab-hawleed fuliya!
Waa kuwan sawir-gacmeed weyn oo ku saabsan Xaaladda Macluumaadka ka socda Dugsiyada Sare ee Suuqgeynta:
Tags: Macluumaadka Suuqgeyntagobolka infographics
Saamaynta Mobilka iyo Hadiyadaha
Jan 14, 2013 saacadu markay ahayd 5:45 PM
Buugaagta kulleejku waxay noqon doonaan qalab wax ku ool ah oo wax lagu barto haddii bog kasta uu ka koobnaado wax aan ka ahayn sawir-qaadista. 😉